पार्लर धाउनु पर्दैन, यसरी गर्नुस ‘स्मार्ट मेकअप’
विवाहको माहोल छ । विवाहमा बेहुली मात्र होइन, जन्ती जानेहरुले पनि आफूलाई राम्री देखाउन अनेक प्रयास गर्छन् । आफूले नसके पार्लर धाउँछन् । त्यसो त अरुबेला पनि महिलाहरुले आफ्नो सौन्दर्यमा ध्यान नदिने होइनन् । उनीहरु आफ्नो अधिकांश पैसा त मेकअपमै खर्चने गर्छन् । तर, मेकअपलाई सही तरीकाले प्रयोग गर्न नसक्दा उनीहरुले गरेको खर्चले उल्टै शरीरलाई
महंगा ट्रिटमेन्ट किन ? हाम्रो भान्छामा नै छन् सौन्दर्यका यी १२ खजाना
अनुहार चम्किलो, मुलायम, सुकिलो कसरी बनाउने ? संभवत यही प्रश्नले लखेटेर तपाईलाई कहिले ब्युटी पार्लर पुर्‍याउँदो हो वा कस्मेटिक्स बजारमा । सौन्दर्य बढाउने अनेक कृतिम उपाय छन् । पार्लर छन् । स्किन अस्पताल छन् । बजारभरी छ्यापछ्याप्ती सौन्दर्य प्रसाधन छन् । यी सबैबाट तपाई/हामी आफुलाई आकर्षक, राम्रो/राम्री देखाउने यत्न गर्न सक्छौं । जमना व्यक्तित्वको छ
हेयर केयरः कपाल बाँधेर कि खोलेर सुत्ने ?
झट्ट सुन्दा सामान्य लाग्छ । तर, कपालको सौन्दर्यसँग जोडिएको कुरा हो यो । राती सुत्दा तपाई कपाल खुला छाड्नुहुन्छ कि बाँध्नुहुन्छ ? दिनभर त हामी कपालको हेरचाह गर्छौं । स्याम्पु गर्छौ । तेल मसाज गर्छौं । धुलो-धूवाँबाट जोगाउन स्कार्फले ढाक्छौ । तर, राती नि ? रातभर कपाललाई बेवास्ता गर्छौं । जबकी हामीले राती सुत्ने क्रममा
सुन्दर बन्ने होडमा मानिसहरु केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने थाहा पाउन भियतनाममा चलेको ट्रेन्ड हेरे पुग्छ । यहाँका पुरुष र महिलाहरु सुन्दर र चम्किलो देखिनका लागि अनुहारमाथि आगो लगाउन पनि तयार छन् । अनुहार सुन्दर बनाउनको अनुहारमा आगो लगाउने प्रक्रियालाई ‘फायर थेरापी’ भन्ने गरिन्छ, जुन भियतनाममा निकै लोकपि्रय छ । सुन्दर देखिने लोभमा भियतनामीहरु सैलुन र
हेयर केयरः कपाललाई यसरी मुलायम बनाउने
तपाईले अनुभव गर्नुभएकै होला, जति जति जाडो बढ्दैछ, कपाल उत्तिनै रुखो हुँदैछ । चाया पदैछ । हाँगा फाट्दैछ । त्यसै पनि यो मौसममा वातावरण सुख्खा हुन्छ । त्यसको असर छाला तथा कपालमा पर्ने नै भयो । त्यसबाहेक जाडोमा टोपी लगाइन्छ, यसले पनि कपाललाई असर गर्छ । अर्कोतिर जाडो याममा कपाल नुहाउन जाँगर चल्दैन । कतिपयले
नव-दुलहीले यसरी बनाउने आकर्षक फिगर
विवाह समारोहमा सबैको नजर दुलहा-दुलहीमा हुन्छन् । त्यो भव्य तामझाममा उनीहरुको उपस्थिती र गेटअप विशेष पनि हुन्छ । आगन्तुक तथा निम्तालुहरु दुलहा-दुलहीमा केन्दि्रत हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आफुलाई दुलहा वा दुलहीको गेटअपमा आकर्षक देखियोस् भन्ने चाह हुनु स्वभाविक हो । अक्सर दुलहा-दुलही विवाहका समय विशेष तयारी गर्छन्, सावधानी अपनाउँछन् । कतिले हातखुट्टा, कपाल लगायत समग्र
चिसोमा मोइस्चराइजिङ क्रिमको प्रयोग गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिने ?
तिहार सकिए लगत्तै अब जाडोयाम सुरु भएको छ । जाडोयाममा घाम ताप्न निकै मज्जा आउँछ । तर, जाडोयाममा वातावरण चिसो हुने भएकाले छाला सुख्खा हुने तथा फुस्रो हुने गर्छ । समयमै उपचार नगरेको खण्डमा छाला सुख्खा भई फुट्ने तथा चिरा पर्ने गर्छ । यसबाट बच्नका लागि पनि छालालाई नरम बनाउन जरुरी छ । अहिले बजारमा
फेसनको नाममा अजिव हेयरस्टाइल बनाएका केही नमुना व्यक्तिहरु ! हाँसो रोक्ने प्रयास गर्नुहोला !
कपालको स्टाइलले एक मानिसको व्यक्तित्व झल्काउने गर्छ भने कोही सामान्य हेयर स्टाइलमा सजिन मन पराउने गर्छन् भने कोही फरक तरिका बाट सजिने शौख राख्ने गर्छ। पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा अजिव प्रकारको मानिसहरु देख्न पाइन थालेको छ। पप्रख्यात बन्नको लागि मानिसहरु विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन् भने आज हामी तपाईलाई सामाजिक संजालमा फेला परेका केही अजिव हेयर
नवदुलहीलाई टिप्सः भड्काउनेसँग सावधान !
आफ्नो विवाहलाई विशेष र अविस्मरणीय बनाउन हरेक व्यक्तिले कयौ सपना बुनेका हुन्छन् । तर, बिवाहको दिनमा गरिने स-साना गल्तीले पनि माहोल बिगि्रन सक्छ । आखिर यही दिनले तपाईंको जीवनमा नयाँ मोड ल्याउने हो । त्यसैले विवाह वन्धनमा बाँधिनुअघि यी कुराहरुमा विशेष सजगता अपनाउन जरुरी छ : रिसबाट टाढा विवाहमा धेरैजसो बेहुली घरको सजावट र मेकअपलाई